Manifesto - Diabe Eran-tany
Fanehoana an'izao tontolo izao
Folo taona taorian'ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanana, ny antony nanosika azy, izay mbola tsy nihena, dia nohamafisina. Miaina ao amin'ny tontolo iray izay nitombo ny unilateralism mpanoratra. Ny anjara asan'ny Firenena Mikambana amin'ny famahana ny fifanolanana iraisam-pirenena dia ny fahaverezan'ny tanjaka. Tontolo izay mirongatra ady am-polony, izay mazàna amin'ny fanovana diso. Ny krizy ekolojika fa ny Club of Rome dimampolo taona lasa izay Miaraka amin'ireo mpifindra monina an-tapitrisany, mpitsoa-ponenana sy ireo olona nafindra toerana no voatery manohitra ny sisintany feno ny tsy rariny sy ny fahafatesana. Raha tiana ny hanamarinana ady sy famonoana olona noho ny ady amin'ny loharanom-bola tsy dia fahita firy. Izay misy ny fifandonan'ny "takelaka geopolitik" eo anelanelan'ny hery ambony sy ny hery vao misondrotra dia fifanenjanana vaovao sy mampidi-doza. Tontolo izay misy ny fitiavan-karena ara-bola be mpanan-karena, na dia any amin'ny firenena mandroso aza, misy fanantenan'ny fiaraha-monina mahasoa. Ny onjan'ny hatezerana izay vokarina dia miafara amin'ny fanodikodinana sy famoronana hetsika manaitra ny fandavana sy ny xenophobia amin'ireo mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina. Raha fintinina dia izao tontolo izao iray izay itondran'ny fanamarinana ny herisetra, amin'ny anaran'ny "fiarovana", mampitombo ny loza ateraky ny fiakaran'ny miaramila amin'ny fepetra tsy voafehy.
El Fifanarahana momba ny tsy fampandrosoana ny fiadiana niokleary, avy amin'ny 1970 , lavitra ny fanokafana ny lalana mankany amin'ny daroka nokleary dia nanamafy ny
herin'ny fandringanana faobe, izay nanitatra na dia ny klioba maty eran-tany niaraka tamin'ny arsenals nokleary ankehitriny dia eo an-tanan'ny Etazonia, Russia, China, United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan ary ny Repoblika Korea. Izany rehetra izany dia manazava ny antony nametrahan'ny komity mpahay siansa Atomika ny index amin'izao fotoana izao (Clock Clock) satria ny loza lehibe indrindra eran-tany dia niaina tao amin'ny Krizin'ny Ranomasin'i Kiobà mg 1962.
Androany, ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-be, dia ilaina kokoa noho ny taloha. Mikasa ny handao an'i Madrid amin'ny Oktobra 2 ny 2019 mba handratra ny kontinanta rehetra, mandra-pahatongan'ny volana martsa 8 amin'ny 2020 izay hifarana any Madrid. Hampiroborobo ny fampianarana amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny federasiona ny hetsika izay miaro sy hampiroborobo ny
demokrasia, fahamarinana ara-tsosialy sy tontolo iainana, fitovian-jo, firaisan-kina eo amin'ny vahoaka sy ny faharetan'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Tamin'ny volana martsa izay mikendry ny hanomezana maso sy manome hery ireo hetsika, vondron-javatra sy fikambanana ireo, amin'ny fifandrindrana manerantany amin'ny ezaka atao amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Manangom-baovao lehibe manerantany an'io "isika, ireo vahoaka " deCharteran'ny Firenena Mikambana, hanohana ny Fifanarahana mikasika ny fandrarana ny fiadiana niokleary, izay manafoana ny mety hisian'ny loza planeta sy ny harena maimaimpoana hamaha ny filàn'ny zanak'olombelona.
refound Las Firenena Mikambana , manome ny fandraisana anjara amin'ny fiarahamonim-pirenena, manindrahindra ny Filankevim-piarovana mba hanova azy ho tena izy Filankevitry ny Peace Peace . ary mamorona Filankevitry ny tontolo iainana sy ara-toekarena, izay manamafy ny laharam-pahamehana dimy: sakafo, rano, fahasalamana, tontolo iainana ary fanabeazana.
Alaivo sary an-tsaina hoe a Hanoherana ny famindrana hanoanana, mifanaraka amin'ny SDG (Tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra) izay manana ny vola ilaina mba hahomby.
Activate a Drafitry ny fepetra maika ny fanoherana ny karazan-kery, fanavakavaham-bolon-koditra, fanavakavahana, fanavakavahana ary fanenjehana amin'ny firaisana, taona, firazanana, firenena na firenena .
Ampandrosoy a Satan'ny demokratika momba ny zom-pirenena, izay mameno ny Fanambarana ny zon'olombelona (olom-pirenena, politika ary sosialy).
mampiditra Charter an'ny Tany ho an'ny "International Agenda" an'ny SDG, hiatrika tsara ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny lafiny ivelany amin'ny tsy fahampian'ny tontolo iainana.
Ampio ny Tsy misy herisetra mihetsika ka izany no lasa hery manova fatratra an'izao tontolo izao, miala avy amin'ny kolontsaina mampimamo, herisetra ary ady mankany amin'ny kolontsaina fandriampahalemana, fifanakalozan-kevitra ary firaisankina ao amin'ny faritra tsirairay, firenena sy faritra amin'ny fomba fijery manerantany nampita antsika tamin'ity Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa.
Download ny Manifesto amin'ny PDF
Taratasy ho an'izao tontolo izao tsy misy herisetra
Adikao ny Manifesto (frantsay)